मोदीको नेपाल भ्रमण र सामाजिक सञ्जाल – BRTNepal
मोदीको नेपाल भ्रमण र सामाजिक सञ्जाल
देवराज न्यौपाने २०७५ वैशाख २८ गते १०:२६ मा प्रकाशित
छिमेकीसँगको सम्बन्ध नजिकको नाता श्रीमान् श्रीमती या दाजुभाइकै जस्तै ‘न काट्न मिल्ने न साट्न मिल्ने’ हुन्छ, मिलेर बस्न नसके साह्रो दुख पाइन्छ । घरको छिमेकी भए त बसाई सर्न नि मिल्थ्यो तर देशलाई त न कतै सार्न नैं मिल्छ । त्यसमा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध त बोर्डर समेत खुल्ला रहेको, परापुर्व बौद्धिक कालदेखि नैं धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक देखि हरेक कुरामा नंग र मासु जस्तै सम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । प्रेम पनि आफ्नैंमा हुन्छ र झगडा पनि आफ्नैंमा भने जस्तै चाहे सकारात्मक होस् या नकारात्मक भारत र नेपाल सम्बन्धको कुरा नगरी हामीलाई भात खाएको पनि पच्दैन । एउटा न एउटा विषय आइरहेको हुन्छ, जस्तो अहिले मोदी भ्रमणको चर्चा छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध सदाका लागि सत्रुवत बनाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक छैन र कसैका लागि हितकर छैन । भारतको उग्र विरोध या उग्र राष्ट्रवाद र देशको स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर स्वार्थी गठबन्धन र चाकरी या लम्पसारवाद दुवै कुरा विगतमा हुँदै आएका घातक कुराहरू हुन् । छिमेकी नभै पनि हुँदैन र समस्याहरू पनि त्यतिकै हुने गर्दछन् चाहे घर घरका छिमेकीको कुरा होस् या देश देशका छिमेकीका कुरा । तर न काट्न मिल्ने न साट्न मिल्ने यस्ता सम्बन्धहरूलाई बिगार्न भन्दा सपार्नै पट्टि ध्यान दिनु पर्छ तथापि यो सप्रिन भन्दा बिग्रनैं खोजिराखेको हुन्छ । यसमा उच्च स्तरको सुझबुझ, समझदारी, धैर्यता र व्यवस्थापन कलाको जरुरत पर्दछ । तसर्थ नेपाल भारत सम्बन्ध पनि बिगार्ने भन्दा सुधार्ने कुरा नैं बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया त सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्दै छन् अहिले । अमेरिका र क्युवाको सम्बन्ध सुधार्ने ओबामाको प्रयास पनि सह्राहनीय थियो । मिल्नु भन्दा उत्तम अर्को केही छैन । समस्याको जरो समाएर उपचार गरी दिए पछि सक्किगो, सजिलो छ । हामी दुवै (नेपाली तथा भारतीय) बुद्ध माथि गौरव गर्छौँ, राम्रो कुरा हो । बुद्ध भन्नु हुन्छ, “सन्सारमा दुख छ या समस्याहरू छन् र साथसाथै यसको समाधानको उपाय पनि छ र यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।”
हिजो भारतीय नाकाबन्दीको डटेर विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो, राज्य र सबै नागरिकको कर्तव्य पनि थियो । यो कर्तव्यमा कोही चुकेको भए त्यसको परिणाम पनि भोग्दै होलान् । तर यही र यस्ता विषयहरूलाई जिन्दगीभरिको राजनीति गर्ने विषय बनाइनु हुँदैन । मान्छे भए पछि गल्ती त सबैबाट भैहाल्छ नि तर त्यसलाई सच्याउने सरी भन्ने अघि बढ्ने हो, सिम्पल । सम्बन्ध बिगारिराखेर कसैलाई फाइदा हुँदैन, मेरो मत्लव नेपालका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू र नेपाल तथा भारत । पालै पालो एउटाले अर्कोलाई राष्ट्रघाती साबित गर्ने प्रयासमा गल्तीमाथि अर्को गल्ती थप्दै नजाऔं । चुनावी प्रतिस्पर्धा बाहेक कमसेकम देशको मुद्दामा त एक हुन सकौँ । यो सबै मिलेर देश बनाउने अवसर हो र अझ पनि चेत नआए कहिले आउँछ ? हाम्रो उद्देश्य मोदीजीहरुलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराउने मात्रै हो । हामी नेपाली यही निहुँमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आतिथ्यमा अपमान गर्न सक्दैनौँ, यसो गर्न हाम्रो संस्कारले पनि दिँदैन । आतिथ्यका बेला गरिने अपमान नैं ठुलठुला युद्ध र झगडाका कारण बनेका धेरै उधारणहरु छन् । मोदीजीहरुले पनि आफ्नो गल्तीको महसुस गरिसकेको हुनुपर्छ ।
उनलाई पनि नेपालसितको दुस्मनी हात्तीलाई कमिलासितको दुस्मनी जस्तै महँगो पर्नेछ । सुँड भित्र पस्यो भने के गर्ने? तसर्थ दुवै पक्ष मिलेर जाँदा नैं दुवैको कल्याण छ । तसर्थ भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई विना कन्जुस्याई हाम्रो संस्कार अनुसार नैं भव्य रूपमा स्वागत गरिनु पर्दछ । उनले गरेका हिजोका गल्ती कूटनैतिक ढङ्गले महसुस गराउनु पर्दछ । नाकाबन्दीको रिस मर्न नपाउँदै त यत्रो स्वागत पाइयो भने त्यसो नगरेको भए हुने रहेछ भन्ने पार्नु पर्दछ । जसरी नेपाल भखरै मात्र नयाँ सम्विधान र राज्य व्यवस्थामा देशको पुननिर्माण र सम्बृद्धिको यात्रा सुरु गरेको छ, यसमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । हामीलाई झगडामा अलमलिने समय पनि छैन । यो भ्रमण नयाँ ढङ्गले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित पारिस्परिक हितका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न, बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न र आपसी हितका लागि विकाशका योजना र कामलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण साबित होस् । सबैको ध्यान कसरी यो भ्रमण नेपालको हितमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित होस् । यस महत्त्वपूर्ण अवसरबाट नेपाल कत्ति पनि चुक्न हुन्न ।
बिचार :रविन्द्र मिश्रले उठाएको कदम